TarnovoRUNS - အားကစားနှင့်ကျန်းမာရေးတို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းကို - အောင်မြင်ပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ဗစ်တာ Galabov နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ဗစ်တာ Galabov တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်သည်သူ၏လုပ်ရပ်များအပေါ်မူတည်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်း, တစ်ဦး Idealist ဖြစ်ပါတယ်။ သူ TarnovoRUNS အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။
လူတွေတဲ့အတွက်မနေ့တုန်းက, ပြင်ပကြံ့ခိုင်ရေး, ရွရွပြေး, ဒေသတွင်း၌တောင်တက်, ဘားလေ့ကျင့်ခန်း, သင့်လျော်သောအစာအာဟာရမှတဆင့်ခိုင်ခံ့ကျန်းကျန်းမာမာအသက်ရှင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ: ဤပါဝင်သည်ဟုလူကြိုက်များသင်တန်းများဖြစ်ကြသည်။
လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုတစ်စုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရာပေါင်းများစွာပန်းခြံဆီသို့ရောက် လာ. ,! ကနျြးမာရေး, ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ခက်ခဲအလုပ်နှင့်အတူတည်ဆောက်တဲ့ဆန္ဒတော့မဟုတ်ပါဘူး! နှစ်နှစ်များအတွက်ဘတ်ဂျက်မရှိဘဲ! လေ့ကျင့်ရေး, ယောဂ, တောင်တက်, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, ရုပ်ရှင်အဘို့အ 200 အစည်းအဝေးများကျော်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်: အမြန်ဆုံးထံမှမှအနှေးဆုံး, အင်အားအကောင်းဆုံးအနေဖြင့်အနည်းဆုံးရန်, အပြင်းထန်ဆုံးကနေပေါ့ပါးဖို့, အများဆုံးဗဟုသုတအနေဖြင့်အသစ်သောအသိပညာရဖို့ရန်ဆန္ဒရှိတရန်။ ဒါကဆွေးနွေးစည်းရုံး, ဝေစုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီပေးဖို့အခွင့်အလမ်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုကိုသိသိသာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အချိန်ကြာပါတယ်။ သဘာဝကျကျ, အကြီးမြတ်ဆုံးပြောင်းလဲမှုလကြာ TarnovoRuns ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြသူလူစုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကယခုသူတို့၏အလောင်းများကိုဖို့တာဝန်အပြည့်အဝသတိပြုမိကြသည်။ ကနျြးမာရေးကိုသူတို့ကရှာသည်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်, သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဘဝအပြောင်းအလဲထောက်ခံမှု positivism နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏အသစ်သောသဘောကိုလူပျေါထှနျးဟာသူချင်းနားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့မိမိတို့၏သဘောထားကို။ လူမှုအတားအဆီး, အစွဲ, အမည်းစက်, ကြောက်စိတ်ကလူ "မွေးဖွား" ခဲ့ကြတိုင်းလမ်းအတွက်ကျိုးအကျိုးဆက်ကပို, လူမှုရေးအပြုသဘောနှင့်တက်ကြွပါပြီ။
အလက်ဇန်းဒါး Naydenov - 30 များအတွက် Forbes မဂ္ဂဇင်း 30 လက်အောက်တွင် 2017 များထဲမှ
ဘားလေ့ကျင့်ခန်း, ဆွေးနွေးမှု, ကျန်းမာသောလူနေမှု, တောင်တက်, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, ရွရွပြေး, ပြင်ပကြံ့ခိုင်ရေး, ညှိနှိုငျးဖလှယျပှဲ, လူမှုရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး, အားကစား, tarnovoRUNS, သင်တန်းများ | 14-12-2016 | rating:5/ 30